२४ माघ, काठमाडौं । आँखाले भ्याउनेसम्मको फराकिलो लेकाली फाँट । सतहमा रंग-विरंगी जंगली फूलहरु । मध्यभागमा कलकल बग्ने खोला । खोला किनारमा मन्दिर । कुनै सिपालु चित्रकारले कुशलतापूर्वक खिपेको ल्याडस्केप जस्तो । आहा ! कति मोहक बडीमालिका । प्रकृतिको यो कस्तो मनोहर उपहार ? जब-जब खप्तड र बडीमालिकाकको प्रसंग आउँछ, मेरो हृदय यसै-यसै रोमाञ्चित हुन पुग्छ […]
नेपाललाई तत्काल खोप दिन इच्छुक देखिएनन् उत्पादक
१८ माघ, काठमाडौं । भारतले उपहारमा दिएको खोपले खोप अभियान सुरु भए पनि नेपालले थप खोप पाउन कठिन भएको छ । कुनैपनि कम्पनीले ने‍पाललाई खोप दिने चाहना नदेखाएपछि हाल सञ्चालित खोप अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी तीन महिनामा सबै नागरिकलाई खोप दिने बताए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीहरु […]
१६ माघ, काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरुको मूल्यमा यो साता पनि उतारचढाव आयो । सर्वसाधारणको भान्सामा जरुरी चिनी, खाने तेल र चामलको मूल्य ब्यापारीहरुले यो साता पनि बढाएका छन् । साताभर हरियो मौसमी तरकारीमा काउलीको मूल्यमा दोब्बर बढेको छ भने गोलभेडा, बन्दालगायतका तरकारीको मूल्य स्थिर छ । माछा र खसीको मासुको मूल्य स्थिर रह्यो […]
के खोपका लागि सन् २०२२ सम्म नै कुर्नुपर्ने हो ?
१५ माघ, काठमाडौं । गत नोभेम्बर महिनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप आएपछि विश्वभरका मानिसहरुले खुसीयाली व्यक्त गरे । खोप आएसँगै अब विस्तारै कोरोना महामारी पनि अन्त्य हुने दिशातर्फ उन्मुख हुने धेरैको विश्वास थियो । यद्यपि सोचेजस्तो सहजरुपमा कोरोना महामारीको अन्त्य नहुने केही संकेत देखिएको छ । विशेषगरी मुलुकहरुबीचको वर्गीय असमानताको कारण महामारी अझै लामो […]
११ माघ, काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । व्यापार र म्युचुअल फण्डबाहेकका सबै समूहहरु बढेर हरियाली छाएका छन् । कारोबार शुरु भएदेखि नै उकालो लाग्न सुरु गरेको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक एक घण्टामा नै ४८ अंकले माथि लागेको छ । अझ रोचक त पहिलो घण्टामा नै ५ कम्पनीहरुको सेयर […]
१० माघ, काठमाडौं । मलेसियाबाट नेत्रप्रसाद भट्टराईले परिवारसँग बाचा गरेका थिए ‘यो माघमा त जसरी पनि घर आउँछु ।’ सन् २०१२मा रोजगारीका लागि मलेसिया भासिएका झापाका भट्टराईको सपना पुरा हुन पाएन, खुसीयाली लिएर फर्किने बाचा गरेका भट्टराईको शनिबार मृत शरीर मात्रै स्वदेश फर्कियो । साथीहरुसँग बेलुका सँगै खाना खाएर सुतेका भट्टराई बिहान उठ्दा जीवित थिएनन् […]
६ माघ, काठमाडौं । साधारण सेयर (आईपीओ) आवेदनमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओमा १५ लाख २९ हजार ४६० ले १८ करोड १२ लाख ८६ हजार ७२० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । यस अघि चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडमा १२ लाख ७७ हजारले आईपीओका लागि आवेदन दिएका थिए । ८ अर्ब रुपैयाँको […]
चालु खाता फेरि घाटामा, अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ला ?
५ माघ, काठमाडौं । चालु खाता सधैं जसो घाटामा रहने गरेकोमा कोरोना महामारीपछि अवस्था फरक बन्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि देशमा चालु खाता घाटामै थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती अवस्थादेखि भने चालु खातामा सुधार भएको देखिएको थियो । चालु आवको पहिलो महिना साउनदेखि नै बचतमा गएको चालु खाता आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास […]
३ माघ, काठमाडौं । बागमती प्रादेशिक क्रिकेट संघले काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा शतक बनाउने आफ्ना प्रदेशका खेलाडीलाई १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । संघले पीएम कपमा शतक हान्ने खेलाडीलाई १० हजार र अर्धशतक प्रहार गर्ने खेलाडीलाई ५ हजार दिने संघका सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिए । यस्तै […]
फुटबल छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए नेमार
४ माघ, काठमाडौं । ब्राजिल तथा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी)का फरवार्ड नेमारले कुनै समय आफू फुटबल छाड्ने अवस्थामा पुगेको आश्चर्यजनक खुलासा गरेका छन् । अहिले जुन खेल खेलिरहेका छन् त्यही खेलमा उनी सधैँ खुशी थिएनन् । नेमारले कुनै समयम आफूले फुटबल करियरलाई अन्त्य गर्न चाहेको खुलासा गरेका हुन् । ‘मैले आफैँलाई एकपटक सोधेँ […]
१ माघ, काठमाडौं । थारु समुदायको मुख्य पर्व माघी काठमाडौंमा पनि मनाइएको छ । काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका थारु समुदायले यहीँ आफ्नो साँस्कृतिक मान्यताअनुसार माघी पर्व मनाएका छन् । काठमाडौंको अनामनगरमा पनि थारु समुदायको एक समूहले साँस्कृतिक भेषभूषा प्रदर्शनीसँगै माघी पर्व मनाएको छ । विगतमा टुँडिखेलको फराकिलो ठाउँमा भेला भएर माघी पर्व मनाउने गरिए पनि […]